Global Voices teny Malagasy » Ny malaza ao amin’ny bilaogy Aziatika Atsimo · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny malaza ao amin'ny bilaogy Aziatika Atsimo
Voadika ny 29 Oktobra 2018 5:39 GMT 1	 · Mpanoratra Neha Viswanathan Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, India, Nepal, Pakistana, Sri Lanka, Mediam-bahoaka
Metroblogging Lahore mampiseho ny toe-tsain'ny fifidianana ao an-toerana ao Lahore ao Pakistana, maneho hevitra momba ny fihetsiky ny Lahoris izay saiky tsy miraharaha. Amin'ny fanohizana ny lohahevitra Lahore, manome rohy mankany amin'ny fanadihadiana amin'ny boky momba ny faritra mena ao an-tanàna  antsoina hoe Heera Mandi i pakistani perspective. Ary avy eo, misy ity lahatsoratra momba ny Fetiben'ny sarimihetsika Pakistaney voalohany ao Eoropa natao tany Angletera ity.
Sepia Mutiny namoaka lahatsoratra momba ny famonoan'ny polisy olona tsy manan-tsiny tany Londra . Ao amin'ny Flotsam, manohy ny fizotry ny fandinihana i KM ary manontany hoe “Ity ve no Herinandron'ny Famonoana ny Fahadisoam-panondroana ilay olona ?”
Dilip D'Souza namoaka ny fanambarana an-gazety avy amin'ireo fikambanam-behivavy sasany ao Mumbai tao amin'ny bilaoginy. Manazava ny toetoetry ny adihevitra tao amin'ny Antenimiera momba ny Lalànan'ny Dihy Bar ny fanambarana an-gazety. Zoo Station kosa namoaka lahatsoratra momba ny boky vaovao ‘The Argumentative Indian’  nosoratan'i Amartya Sen , sy ny vokatr'izany amin'ny ezaka teo aloha hanazava ny hevitr'i India amin'ny Tontolo Tandrefana. Lahatsoratra ao amin'ny The Acorn indray miresaka momba ilay lehilahy izay namono an'i Daniel Pearl  mpanao gazety.
Avy amin'ny weBlog an'i Imtiaz, hafatra an-tsoratra sy sary mampiseho ny antsipirian'ny handravana an'i Dhaka , Bangladesh. Famintinana tantara telo  ao amin'ny Deshcalling momba ny firesahana amin'ireo tanora Miozolomana. Sadiq M. Alam indray mampifandray ny tranonkala tokana misy soratra avy amin'ny fivavahana telo . Unheard Voices, kosa manoritra ny adihevitra momba ny fikarohana nataon'i Sarmila Bosentrov  momba ny fiampangana ny tafika Pakistaney tamin'ny taona 1971.
Mibilaogy avy any Nepal, ity lahatsoratra ity dia mametraka ny hevitra fa manampy trotraka amin'ny toe-draharahan'ny VIH ny ady ao amin'ny firenena . Nosamborina  ireo mpikatroka any Nepal noho ny fananganana teny filamatra mpomba ny demokrasia ao Nepal.
Days Go By manadihady momba ny fiainana amin'ny alina ao Colombo ao Sri Lanka , taorian'ny zava-nitranga vao haingana tao an-tanàna. LIRNEasia indray manana lahatsoratra mahafinaritra momba ny fivorian'ny fiarahamonina ao Polonaruwaty mba hiresaka momba ny fepetra noraisina manoloana ny loza vokatry ny fiarovana tohodrano. CSR Asia namoaka tatitra iray manadihady ireo olana mifandraika amin'ny herisetra mihatra amin'ny ankizy any Azia Atsimo .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/29/128523/
 toe-tsain'ny fifidianana ao an-toerana ao Lahore : http://lahore.metblogs.com/archives/2005/07/lahore_local_bo.phtml
 fanadihadiana amin'ny boky momba ny faritra mena ao an-tanàna: http://www.pakp.com/2005/07/book-review-dancing-girls-of-lahore.html
 ity lahatsoratra momba ny Fetiben'ny sarimihetsika Pakistaney voalohany ao Eoropa : http://www.pakpositive.com/2005/07/22/europes-first-pakistani-film-festival-planned-in-uk/
 famonoan'ny polisy olona tsy manan-tsiny tany Londra: http://www.sepiamutiny.com/sepia/archives/001885.html
 Ity ve no Herinandron'ny Famonoana ny Fahadisoam-panondroana ilay olona: http://pronounce.blogspot.com/2005/07/is-this-mistaken-identity-killing-week.html
 fanambarana an-gazety avy amin'ireo fikambanam-behivavy sasany ao Mumbai : http://dcubed.blogspot.com/2005/07/roadside-taporis.html
 boky vaovao : http://wetware.blogspot.com/2005/07/argumentative-indian.html
 lehilahy izay namono an'i Daniel Pearl: http://opinion.paifamily.com/?p=1544
 mampiseho ny antsipirian'ny handravana an'i Dhaka: http://blog.imtiaz.info/2005/07/21/ora-basti-te-thaktow-ekhon-rasta-te/
 Famintinana tantara telo: http://deshcalling.blogspot.com/2005/07/hear-true-voices-of-islam-3-stories.html
 soratra avy amin'ny fivavahana telo: http://mysticsaint.blogspot.com/2005/07/only-site-online-that-brings-together.html
 adihevitra momba ny fikarohana nataon'i Sarmila Bosentrov: http://www.drishtipat.org/blog/2005/07/20/sarmila-the-curious-historian/
 manampy trotraka amin'ny toe-draharahan'ny VIH ny ady ao amin'ny firenena: http://insn.org/?p=1538
 fiainana amin'ny alina ao Colombo ao Sri Lanka: http://phlayer.blogspot.com/2005/07/well-never-run-out-of-idiots-in-sri.html
 fivorian'ny fiarahamonina ao Polonaruwaty : http://www.lirneasia.net/
 olana mifandraika amin'ny herisetra mihatra amin'ny ankizy any Azia Atsimo: http://www.csr-asia.com/index.php?p=2562